﻿ पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६ वटा टेलिफोन नम्बरहरु
पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका ६ वटा टेलिफोन नम्बरहरु
इटहरी । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई तपाईले सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ? छ भने कुन नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ ?
विश्वविद्यालयको आधिकारीक वेवसाइट www.puexam.edu.np मा विश्वविद्यालयको लेटरप्याड देख्न सक्नहुन्छ । लेटर प्याडमा चार वटा नम्बर दिइएको छ । तर दुर्भाग्य, पूर्वको एउटै मात्र विश्वविद्यालयको चार वटै नम्बरबाट फोन सम्पर्क हुँदैन ।
पहिलो नम्बर छ, ०२१५३२०२२, यो नम्बरमा फोन लाग्दैन । अर्को नम्बर छ, ०२१५३४८०० । यो नम्बरमा पनि फोन लाग्दैन ।
तेस्रो नम्बर ०२१४४०१७३ मा फोन गर्नुभयो भने नम्बर परिवर्तन गरिएको छ । परिवर्तित नम्बर ०२१५४०१७३ हो । तर बिडम्बना, यो नम्बरमा पनि फोन लाग्दैन ।
चौथो नम्बर हो, ०२१४४०७१४ । यो नम्बर पनि परिवर्तन गरेर ०२१५४०७१४ बनाइएको छ । र यो नम्बरमा गरेको फोन उठ्दैन ।
वेवसाइट बनाएर नियमित अपडेट गरिरहेको विश्वविद्यालयको वेवसाइटमा कुनै सम्पर्क नम्बर राखिएको छैन ।
गोठगाउँमा विश्वविद्यालयको भव्य संरचना हुँदा हुँदै विराटनगरमा सम्पर्क कार्यालय राखेर लामो समयदेखि विराटनगरबाटै प्रशासन चलाएर पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आलोचित बनेको थियो । विश्वविद्यालयका प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरु विश्वविद्यालय रहेको स्थान गोठगाउँबाट काम गर्नै मान्दैनथे । पछिल्लो समय सकारात्मक वातावरण बनेपनि फोन नम्बर र सोधपुछको कामलाई समेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय प्रशासनको जवाफदेहीता र कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ ।
हजारौं विद्यार्थी, अविभावक तथा सर्वसाधारणलाई जवाफ दिनुपर्ने नम्बरहरुबाट सम्पर्क हुँदैन भने ती नम्बरहरु किन राखिएका छन् र ती प्रभावकारी सम्पर्क माध्यम किन बनाउन सकेको छैन, विश्वविद्यालयले अब यी प्रश्नहरुको उत्तर कसरी देला ?
शुक्रबार १५ महिला सहित मोरङका ६४ जनामा कारोना पुष्टि
माई खोलाले बगाएर १४ बर्षीय बालक बेपत्ता
झापको गैरीगाउँबाट अवैध लागूऔषध सहित एक युवक पक्राउ
नेपालमा थप ४६४ जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या २२ हाजार नाघ्यो
नाइजेरियामा गोली हानाहान हुँदा २१ जनाको मृत्यु